China Nile Na Otu Mbara Igwe Anya, Anyanwụ na-adọba ụgbọala na-acha ọkụ, 30W Sun Street Street Light Manufacturer
Nkọwa:Ihe niile na otu ìhè ìhè anyanwụ ,Anyanwụ na-adọba ụgbọala ọkụ,30W ìhè anyanwụ anyanwụ,Mgbasa Ozi Okirikiri Ala,,
Home > Ngwaahịa > Mbara Igwe Ochie > 30w Sun Street Street
Ngwaahịa nke 30w Sun Street Street , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ihe niile na otu ìhè ìhè anyanwụ , Anyanwụ na-adọba ụgbọala ọkụ suppliers / factory, wholesale high-quality products of 30W ìhè anyanwụ anyanwụ R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
20w 30w Anyanwụ Street Light Pole Light 3600lm  Kpọtụrụ ugbu a
30W Epeepe Okpu Uhie  Kpọtụrụ ugbu a
30W Atụmatụ Ngwá Ahịa Street Street Akara IP65  Kpọtụrụ ugbu a
30W Ogige Ike Power Light Street Fixture  Kpọtụrụ ugbu a
30W Anyanwụ nwere ike kwadoro oghere ìhè 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
40W Sun Street Street Pole Light 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
30W Ụzọ Mbara Igwe Ọdịda Anyanwụ na-enwu na Otu  Kpọtụrụ ugbu a
30W N'èzí okporo ụzọ okporo ụzọ okporo ụzọ  Kpọtụrụ ugbu a
30W Anyanwụ kwadoro ìhè okporo ọkụ ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
30W N'elu Ugwu Mbara Igwe  Kpọtụrụ ugbu a
30W Igwe ọkụ na-acha ọkụ ọkụ maka ụgbọala ụgbọala  Kpọtụrụ ugbu a
30Wenwu Uhie Ochie Ugwu Ochie  Kpọtụrụ ugbu a
30 Watt Anyanwụ Power Street Pole Light 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
Ogige Mkpuchi Anya bụ ihe ngwọta kachasị mma maka mkpa nchekwa ọkụ dịpụrụ adịpụ. Mkpụrụ ego 30a nke Ahịa nke anyanwụ na-ewu na batrị lithium na usoro nchịkwaghachi na-enye ọnọdụ siri ike, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile. The Light Street Light 20w...
Igwe Uhie anyanwụ na-enwu gbaa 30w bụ ngwọta kachasị mma maka mkpa nchekwa nchekwa dịpụrụ adịpụ. Nke a na- enwu ọkụ maka anyanwụ na-ewu na batrị lithium na usoro nkwụghachi na-enye ọnọdụ siri ike, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile. Ewube Owu Osimiri...
Igwe Uhie Mbara Igwe 30W bụ ihe ngwọta kachasị mma maka mkpa nchekwa ọkụ dịpụrụ adịpụ. Nke a na Ahịa nke Ahịa Igwe Uhie na-ewu na batrị lithium na usoro nkwụghachi na-enye ọnọdụ siri ike, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile. Echiche 30W Atụmatụ Osimiri...
Ala 30W Sun Power Street Light Pole bụ ihe ngwọta kachasị mma maka mkpa nchekwa ọkụ dịpụrụ adịpụ. Nke a na- enwu ọkụ nchara anyanwụ 30W na-ewu na batrị lithium na usoro nkwụghachi na-enye ọnọdụ siri ike, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile. Okpokoro...
Ogologo Osimiri Uhie Na-enwu Ogologo 30W bụ ezigbo ihe ngwọta maka mkpa nchekwa nchekwa dịpụrụ adịpụ. Nke a 30W anyanwụ a kwadobere ya na-ewu na batrị lithium na usoro nkwụghachi na-enye ọnọdụ siri ike, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile. Igwe na-acha...
Umu Igwe Uhie Ogbara Anyanwu nke 40w bụ ihe ngwọta kachasị mma maka mkpa nchekwa ọkụ dịpụrụ adịpụ. A na-enye anyanwụ Amazon Light Solar Street na ọkụ ọkụ 40W nke na-enwu ọkụ na mpaghara 30` x 30 '. Oghere uhie nke anyanwụ 40w nwere oghere nke dị...
Owuwu Anyanwu Anyanwu nke 30w bụ ihe ngwọta kachasị mma maka mkpa nchekwa ọkụ dịpụrụ adịpụ. A na-enye igwe a na-enwu gbaa 30-watt (850 Lumen) nke na-enwu ọkụ na mpaghara 30'x 30 'na mpaghara panel nke nwere ike iji rụọ ọrụ n'ime batrị...
Ọnụahịa otu: USD 131.5 - 134.5 / Piece/Pieces
Ụzọ anyị na- ahụ maka ìhè anyanwụ dị mfe maka nrụnye, ọrụ na-arụ ọrụ na-enweghị nchebe na-enweghị mkpa maka wiwi ma ọ bụ trenchi. Nke a dị n'èzí n'anyanwụ na-ekpuchi ya, mmiri na-adịghị ahụkebe ya na aluminum. Igwe ọkụ anyanwụ na-enwu gbaa...
Oghere Izu Ala nke Watt Street 30 bụ nke zuru oke maka ma ụlọ obibi / ụlọ na ngwa ahịa na ngwepụta dị elu ruo 2500 Lumens! Nke a na- acha ọkụ ọkụ nke dị na windo atụmatụ nke ígwè na ABS na-arụ ọrụ na Smart Sense Technology. Nke a dị ike nke anyanwụ...
Ọnụahịa otu: USD 50 / Piece/Pieces
Nke a N'èzí Wall Ugwu Mbara Anya 30w bụ 2500lm niile wiwi na njikọta na elu mmepụta Solar Outdoor Lighting Wall Mount kpọmkwem na usoro nchịkwa ikike n'enweghị ihe eji achọ ọrụ. Atụmatụ arụ ọrụ na-achọpụta nche nche ihu igwe na-achịkwa...
Ọnụahịa otu: 50USD
Ihe niile na-eme ka ìhè ọkụ anyanwụ maka ụgbọala ụgbọala wepụ mkpa ọ dị maka ngwa ngwa mpụga na batrị batrị dị iche iche ma ọ dịghị achọ ka onye eletrik setịpụ. Nke a 30w anyanwụ na-adọba ụgbọala ọkụ bụ p erfect maka ojiji na Schools, n'ogige,...
Bbier Sun Energy Light Pole bụ ihe ngwọta kachasị mma maka mkpa nchekwa ọkụ dịpụrụ adịpụ. The Light Led Street Light with Pole ejiri 30-watt (850 Lumen) oriọna ọkụ nke na-enwu ọkụ ọkụ na mpaghara 30' x 30 'na mpaghara panel nke nwere oghere...
Anyị 30W Sunlight Led Street Light Pole bụ nnukwu mgbakwunye na-eme ka akụkụ ọ bụla a na-etinye, dị ka Parkways, Ogige ụgbọala, Okporo ámá, Ebe ịzụ ahịa na ihe ndị ọzọ! Nke a Ike Street Light Pole bụ sleek na imewe na mere na Aluminom + ABS (nwere...
China 30w Sun Street Street Ngwa
30W Sun Street Street na ìhè ntanetị, Oge akpaaka / Nrọ abalị Na-agụnye ogwe osisi na-eme ka ihe niile dị n'ime otu ụlọ. All Na One Solar Street Light bụ a nguzo-naanị anyanwụ usoro esịnede a osisi, batrị akụ, photovoltaic modul na ikanam ma ọ bụ CFL luminaires. Ụlọ ọrụ inbuilt dị ike na-akwado anyị Anyanwụ na-adọba ụgbọala ọkụ nwere ike na-agba ọsọ ruo awa 30 mgbe naanị awa 6 dị na anyanwụ - nke a bụ ezigbo enyi na gburugburu ebe obibi .
Ihe niile na otu ìhè ìhè anyanwụ Anyanwụ na-adọba ụgbọala ọkụ 30W ìhè anyanwụ anyanwụ Mgbasa Ozi Okirikiri Ala